Khabiirka Islamabad Expert waxa uu sharxayaa wixii aad ku sameyneyso Spam Spam ee Google Analytics
Inta badan milkiilayaasha bogga, taraafikada taraafigga ee taraafiggu waa dhibaatada ugu weyn ee saamaysa dariiqyada taraafikada. In Google Analytics, qaar ka mid ah tirooyinka taraafikada ayaa laga yaabaa inay muujiyaan balse aan ka turjumin dashboardkaaga. Xaaladahaan, waxaa jira fursad weyn oo booqashooyinka websaydhkan oo aan ka soo jeedin dadka booqdayaasha ah laakiin "kombuyuutarada" zombie. Gaadiidka laga helo bots iyo botnets ayaa yaraynaya saxnaanta farsamooyinka suuq geynta farsamooyinka sida SEO iyo suuqgeynta moodada.
Sohail Sadiq, oo ah khabiir hormood ah oo ka socda Semaat , wuxuu ku siinayaa maqaalka arrimo wax ku ool ah oo aad ka fikirto
Booqashooyinka webka iyo websaydhka dadka
Qaar ka mid ah kiisaska kor ku xusan, waxaa laga yaabaa inay jiraan waqtiyo marka bog cusub oo laga yaabo inuu bilaabo inuu helo gaadiidka joogtada ah ee taraafikada laga helo qaar ka mid ah xaafadaha caadiga ah - mobile numbers in lebanon. Xaaladahan, ha u dabaaldegin guusha maxaa yeelay taasi waxay ka iman kartaa nidaamyada botnet waaweyn. 50% ka mid ah gaadiidka webka adduunka ayaa ka yimaada bots. Bots waa lagama maarmaan u ah isticmaalka bogagga internetka ee ujeedooyinka aasaasiga ah. Goobaha sidoo kale waxay caawiyaan bareegyada raadiyaha shabakadaha iyo boggaga kale ee tusmooyinka bogga kuwaas oo loogu talagalay farsamooyinka wax-qabadka sida suuq-geynta suuq-geynta .
Dhamaan kuwa hallaaga oo dhan ma ahan kuwo xun, tusaale ahaan, bogagga internetka sida PayPal iyo Google waxay ku xiran yihiin qoryaha si ay u fuliyaan qaar ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee howlahooda. Horumarka muhiimka ah ee shakhsiyaadka natiijooyinka raadinta. Kootada waxtar leh waxay ka caawisaa abuurayaasha bogga inay hagaajiyaan khibradda isticmaalaha dad badan oo isticmaalaya.
Xaaladaha kale, dadku waxay isticmaalaan bots si ay u fuliyaan weerarrada websaydhka xun ee ku saabsan dhinacyo kala duwan oo ku yaal bogagga internetka. Waxay khiyaameeyaan nidaamka raadinta raadinta si ay u jahwareeriyaan milkiilaha bogga ee tirada dadka soo booqanaya ee goobta. Waxaa dhici karta in spamer sifududaha uu siyaabo kala duwan u yimaado. Qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee spam gudbiyaha ee dhacaya ayaa ku jira maqaalkan.
Noocyada spam soo gudbinta
Marka ay timaado sharraxaadda spam gudbinta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro nooca spam referrer ee macnaha guud. Xaaladaha badankood, noocyada noocaas ah ee spam waxay ku yimaadaan laba siyaabood:
Tani waxay u badali kartaa booqashooyinka websaydhada bogagga internetka, laakiin waxaa laga yaabaa inaanay ka tarjumin dashboardkaaga goobta. Waxaa intaa dheer, waxay saameeysaa cabbiraadaha falanqaynta Google, muuqaal oo laga yaabo inuu faragaliyo istaraatijiyadaha suuq-geynta internetka.
Spam gudbiyaha Ghost
noocyadan spam ayaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan booqashooyinka shabakada kuwaas oo laga yaabo inay ka tarjumaan jaantusyada boggaaga. Xaaladdan oo kale, booqashooyinka websaydhka been abuurka ah ee la soo gudbiyo waxay isku dayaan inay galiyaan macluumaadka macluumaadka Google Analytics.
Farsamooyinka spam u gudbinta waxay isticmaalaan isticmaalka botnets si ay u sameeyaan booqashooyinka webka ee soo noqnoqda oo loo adeegsado serverka iyada oo adeegsaneysa website-kan gaarka ah. Xaaladaha intooda badan, dadka ka danbeeya weerarrada xun waxay raadinayaan inay kordhiyaan darajada goobta ee SERPs ee bogagga intooda badan. Xaaladaha kale, dadku waxay isku dayaan inay soo saaraan dakhliga ka soo baxaya weerarradan.
Spam Referrer waa dhibaato weyn oo ku habboon GA-gaaga siyaabo badan. Tusaale ahaan, baabuurta kordhay ee ka soo jeeda qadiyadaha gudbinta waxay hoos u dhigeysaa saxnimada xogtaada iyo tayada gaadiidkaaga. Waqtiga xaddiga iyo qiimaha boggaaga ayaa noqonaya mid hooseeya. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro spam u gudbinta si loo kordhiyo wakhtiga ka qaybgalka ee goobtaada.